कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ १६ गते) – इन्सेक
काठमाडौँ ०७७ जेठ १६ गते
नेपालमा जेठ १६ गते थप १ सय ७० जनमा सङ्क्रमण भेटिएको छ । योसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ हजार २ सय १२ पुगेको छ । जसमा १ हजार १ सय ३ जना पुरुष र १ सय ९ महिला रहेका छन् ।
कोरनाबाट निको भएर घर जानेहरुको सख्या पनि बढ्दै गएको छ । जेठ १६ गते मात्रै १९ जना निको भएका छन् । यो सँगै निको हुनेको सङ्ख्या २ सय ६ पुगेको छ । हालसम्म ५२ वटा जिल्लामा सङ्क्रमण फैलिएको छ । नेपालमा थप एक जनाको कोरनाका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । अर्घाखाँची जिल्लाका भुमिकास्थान नगरपालिकाका ३५ वर्षीय पुरुष जसको मृत्यु जेठ १० गते भएको थियो । योसँगै मृतकको सङ्ख्या ६ पुगेको छ ।
प्रदेश १ मा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ सय ५८ पुगेको छ । जेठ १६ गते २८ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् । थपिएका सङ्क्रमितमध्ये २७ जना झापाको कचनकवल गाउँपालिकाका र एक जना भद्रपुर नगरपालिकाका रहेका छन् । प्रदेश १ मा जेठ १६ गतेसम्म १० जना महिला र १ सय ४८ जना पुरुष सङ्क्रमित भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । झापामा १ सय ७, उदयपुरमा ३३, धनकुटामा सात, मोरङमा पाँच, सुनसरीमा तीन, सोलुखुम्बु, भोजपुर र खोटाङका एक÷एक जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । प्रदेश १ मा ३० जना उपचार पछि निको भएका छन् भने १ सय २८ जना उपचाररत रहेका छन् । मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लकडाउनका कारण प्रभावित भएर विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा रहेका भारतीय नागरिकहरूका लागि जेठ १८ (मे ३१) गतेसम्मका लागि भारततर्फ जाने व्यवस्था मिलाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताउनु भएको छ ।
कोभिड–१९ रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार उच्चस्तरीय समितिको जेठ १६ गतेको निर्णय अनुसार प्रदेश २ को ६ ओटा नाकाबाट मात्रै भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल प्रवेश गराइने भएको छ । सप्तरीको कुनौली, सिरहाको माडर, महोत्तरीको भिठ्ठामोड, सर्लाहीको मलंगवा, रौतहटको गौर र पर्साको वीरगञ्ज नाकाबाट भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भित्र्याईदैछ । धनुषा र बारा जिल्लाबाट तत्काल आवतजावत बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको जेठ १६ गतेको निर्णय अनुसार प्रदेश २ को ६ ओटा नाकाबाट मात्रै भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल प्रवेश गराइने भएको छ । सप्तरीको कुनौली, सिरहाको माडर, महोत्तरीको भिठ्ठामोड, सर्लाहीको मलंगवा, रौतहटको गौर र पर्साको वीरगञ्ज नाकाबाट भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भित्र्याईदैछ । धनुषा र बारा जिल्लाबाट तत्काल आवतजावत बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । जेठ १५ गते धनुषामा २९ जना सङ्क्रमति थपिएपछि उपचारका लागि आइसोलेशन बेडको अभाव भएको छ । आइसोलेशन वेडको अभावमा कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई क्वारेन्टाईन र घरमै होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा ४२ बेडको आइसोलेशन प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा मात्रै व्यवस्था गरिएको छ । ४२ आइसोलेशन बेडमध्ये हाल ३० बेडमा बिरामीको उपचार भइरहेको आइसोलेशन वार्डका फोकल पर्सन डा. कुलदिप पण्डितले बताउनु भयो ।
भारतबाट आएका ५१ जना व्यक्तिलाई रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरुले जेठ १५ गते खुलाचौर र ट्रकमुनि बसेर रात बिताएका थिए । उनीहरूलाई चन्द्रपुर नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष रवि देवकाटाले सीमा क्षेत्र गएर जेठ १५ गते दिउँसो ल्याएका थिए । चन्द्रपुर नगरपालिका– ६ स्थित एन्फा महिला एकेडेमीमा रहेको क्वारेन्टाइनमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई राखिएको र थप मानिसहरूलाई राख्न ठाउँ नभएकाले चौरमै राख्नुपरेको वडा अध्यक्ष देवकोटाले बताए । जेठ १६ गते साँझ उनीहरूलाई चन्द्रपुर नगरपालिका–७ स्थित सुवलाल भागवत मा.वि मा राखिएको छ ।
धादिङको बेनिघाटरोराङ गाउँँपालिकाले राहतका लागि ल्याएको चामल गाउँँपालिकाले खरिद गरेकै पसलेलाई बिक्री गर्न खोजेपछि जेठ १५ गते स्थानीयहरूले अवरोध गरेका छन् । राहत वितरण गरेपछि बाँकी रहेको २ हजार ७ सय ७७ बोरा चामल बिग्रने सम्भावना भएकोले खरिद गरिएको सप्लायर्सलाई नै पठाउन लागिएको गाउँँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मण भट्टराईले बताउनु भयो ।
लकडाउनको समयमा लमजुङ पुगेर फर्किएकी चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका–७ स्थित माछापुच्छ्र«े चोकमा भाडामा बस्दै आएकी एक महिलालाई घरबेटीले कोठामा प्रवेश नदिएपछि करिब २ सय मिटर पर रहेको राष्ट्रिय माविको क्वारेण्टाइननमा सम्पर्क गर्दा क्वारेण्टाइनले पनि अस्वीकार गरेको बताइन् । भरतपुर महानगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रमणि काफ्लेले क्वारेण्टाइन पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइनसकेका कारण धेरैलाई राख्न नसकिएको बताउनु भयो । उनलाई भरतपुर १० मा रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्वारेण्टाइनमा लगिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा जेठ १६ गतेसम्म कूल २ हजार ५ सय ६९ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा २ हजार ३ सय १८ जनाको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने १ सय ६ जनाको परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । जेठ १६ गते प्रदेशमा नवलपुरका थप दुई जनामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । योसँगै गण्डकी प्रदेशमा कूल १९ जना सङ्क्रमित भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । जेठ १६ गतेसम्म प्रदेशमा कूल ८ हजार ६ सय ३० जनाको ¥यापीड डाइगनोष्टिक टेष्ट किटबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ । गोरखा जिल्लामा रोजगारीका लागि भारत पुगेका २८ जना नागरिक सुनवल नाका हुँदै जेठ १६ गते जिल्ला भित्रिएकोमा गोरखा नगरपालिका–१३ मझुवाको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश ५ मा २० हजार १ सय ८५ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ भने ३२ हजार ३ सय ७३ जना क्वारेण्टाइनमा छन् । प्रदेश ५ अन्र्तगतका आइसोलेशनमा ३ सय ८३ जना र निको भएर ४७ जना घर फर्किएका छन् । प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार जेठ १६ गतेसम्म ४ सय ६६ जना कोराना सङ्क्रमित भएका छन् । यसैगरी भारतबाट नेपाल आउनेको सङ्ख्यामा कमी आएको छैन । जेठ १६ गते पनि नेपालगञ्ज नाका भएर नेपाल भित्रिनेको सङ्ख्या २२ सय भन्दा बढी पुगेको छ । भारतबाट आउने व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाइँदै आएको छ ।
कालीकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका–६ अन्तर्गत सत्यदेवी मावि जुविथामा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका तीन जनाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि दोस्रो पटक परीक्षण गरिएकोमा रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । सल्यान जिल्लाको दार्मा गाउँपालिकाले रोजगारीका लागि भारत पुगेका व्यक्तिहरू गाउँ फर्किन थालेपछि सुरक्षार्थ ३५ बेडको आइसोलेशनसहित ७ सय शैयाको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ ।
जुम्ला जिल्लामा जिल्लास्तरीय कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र स्थानीय तहको आर्थिक सहयोग तथा समन्वयमा निजी सवारी साधन भाडामा लिएर कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामी बोक्नको लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । हुम्ला जिल्लामा बन्दाबन्दीका कारण काठमाडौँ र नेपालगञ्जमा अलपत्र परेका २ सय ७१ जना विद्यार्थीहरूलार्ई जिल्ला ल्याउन उद्धार कार्य सुरु गरिएको छ ।
दार्चुला जिल्ला शैल्यशिखर नगर कार्यपालिकाको जेठ १६ गते बसेको बैठकले जिल्लामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको भन्दै नगरपालिका पूरै सिल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, जेठ १६ गते बसेको मालिकार्जुन गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले भारतबाट नेपाल आउने सर्वसाधारणहरूलाई राख्न गाउँपालिकाभरि १ सय ६० शैयाको थप क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको छ । कञ्चनपुर जिल्लामा गड्डाचौकी नाकाबाट जेठ १६ गते २ हजार ७ सय ८८ जना नागरिकलाई नेपाल भित्र्याइएकोमा किट अभावका कारण कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन ।